Iwo ekutanga Mheni-jack adapta anotanga kuoneka | IPhone nhau
Pazvinhu zvitsva izvo zvine runyerekupe rwekuuya neiyo iPhone 7, iyo iri pasina mubvunzo inopokana zvikuru kubviswa kweye 3.5mm headphone port. Chikamu chakanaka ndechekuti nekubvisa chinongedzo chakazvarwa muzana ramakore rechi19 tinogona kukunda chipingaidzo cheanalogog uye nekuenderera mberi nekuteerera kurira kwedhijitari, asi chakashata ndechekuti mahedhifoni atove nawo haatibatsire kunze kwekunge tatenga Mheni-Jack adapta kufanana neaya akatotanga kuoneka.
Mune mawonero angu hazviite zvine musoro kuti uvatange nekukurumidza asi, se atumira Macotakara, iyo inogadzira zvigadzirwa Tama Magetsi Iri kutosimudzira matatu maMagetsi-maadapter, maviri ayo anosanganisira diki-USB doko yekuchaja iyo iPhone isu tichiteerera mimhanzi, chimwe chinhu, zvine musoro uye kana Apple isina kufunga mhinduro yakafanana, ichave yakakosha.
Mheni-Jack adapta ine micro-USB
Parizvino, Tama Electric accessories hazviratidze chero mitengo uye havana kugadzirira kutumira izvozvi, tisingataure kuti ivo havazove MFi (Made For iPhone) yakasimbiswa. Kune atove maMagetsi mahedhifoni, asi maadapter aya ndiwo anotanga kuoneka, anogona kunge ari mucherechedzo kune izvo zvinoita kunge chakavanzika chakavhurika. Runyerekupe rwepakutanga runoti Apple ichabvisa 3.5mm headphone jack uye kusunungura mashoma EarPods Mheni, zvakare ichipa Bluetooth headset, pamwe maAirPod, anogona kutengwa chero paApple Chitoro. Izvo zvinoita kunge zvisingaite ndezvekuti ivo vachawedzera adapta seiya anobva kuna Tama Electric mubhokisi, asi isu hatifanire kurasikirwa netariro kudzamara iyo iPhone 7 yaziviswa inotevera Gunyana. Kana vakasasanganisira iyo adapta, isu tichafanirwawo kuona pamutengo wavanoupa asi, nekuziva Apple, zvinonyanya kuitika kuti zviri nani kutenga chinowanikwa kubva kune wechitatu mugadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwo ekutanga Mheni-Jack adapta anotanga kuoneka pamberi pekutanga kweiyo iPhone 7